Maleeshiyada Shabaab oo dad rayid ah ku xasuuqday Gobollada Gedo iyo Shabeelaha Hoose – Radio Muqdisho
Maleeshiyaadka kooxda Shabaab ayaa tuulo hoos timaada waxa ay dileen guddoomiyaha Tuulada iyo qoyskiisa, kaddib markii shan ka mid ah kooxda Shabaab oo si dhuumaaleyso ah u tegay tuulada ay falkaasi geysteen.
Guddoomiyaha degmada Luuq Bishaar Aadan Cabdikariin ayaa sheegay in tuulada lagu dilay dadka ay magaalada u jirto dhowr iyo toban KM, isagoo xusay inay jiraan saddex qof oo kale oo falkaasi ku dhaawacantay oo iminka lagu dabiibayo isbitaalka Luuq.
“Tuulada jid wareeg haddii la maro waxa ay magaalada u jirtaa dhowr iyo toban, laakiin haddi webiga laga gudbo todobo km ayay noo jirtaa, waxa ay tacshiirad ku fureen guriga, halkaasi waxaa ku geeriyooday guddoomiyaha, xaaskiisa, hooyadiis iyo labo kale oo ka mid ah gabdhihiisa, runtii falkaasi aad ayaan uga xunahay” ayuu yiri Bishaar Aadan.
Guddoomiyuhu waxa uu xusay in ciidamada amniga loo diray halka uu falka ka dhacay, isagoo xusay inay baadi goob ugu jiraan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dadkii falkaasi geystay.
Dhanka kale maleeshiyada xagjirka ah ee Shabaab ayaa degmada Qoryooleey ee gobolka Shabeelaha Hoose ku dishay odoy dhaqameed caan ka ah magaalada, iyagoo goobta ka baxsaday kaasi oo la oran jiray Bashiir Xasan Cabdulle Xuurshoow.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siiddi oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in ay cambaareynayaan falkaasi kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ama UGUS ay ka geysteen degmada Qoryooleey.
“Runtii falka ka dhacay degmada Qoryooleey waan cambaareyneynaa, waxa ayna dileen Nabadoon Bashiir Xasan Cabdulle, wiil uu dhalay iyo mid kale oo shaqaale u ahaa, waxaana ciidamada ay iminka ku raad joogaan sidii ay cadaaladda u horkeeni lahaayeen kuwii falkaasi ka dambeeyay” ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose.